सावधान ! यौन असन्तुष्टिले डिप्रेसन यस्तो छ यौनबारे जान्ने पर्ने कुरा - eKhojkhabar
सावधान ! यौन असन्तुष्टिले डिप्रेसन यस्तो छ यौनबारे जान्ने पर्ने कुरा
एक दशकअघिसम्म दैनिक २० जना मानसिक रोगका बिरामी अस्पताल आउने गरेको डा. पोखरेलले बताए । अहिले उक्त संख्या निकै बढेको छ, डा. पोखरेल भन्छन्— अशिक्षा, चेतनाको अभाव र पर्याप्त ज्ञान वा जानकारी नहुँदा अस्पताल वा चिकित्सककहाँ नपुग्ने, धामी–झाँक्रीकहाँ जाने मानसिक रोगीको संख्या योभन्दा धेरै बढी हुन सक्छ । यसले समग्र सामाजिक, मानसिक एवं पारिवारिक जीवनमा असर पार्ने हुनाले यो चिन्ताको विषय हो । डिप्रेसन, एन्जाइटी (डर/त्रास), पेनिक फोयिबा (अत्तालिनु/काँम्नु/छिटो श्वास चल्नु) जस्ता सामान्य प्रकारका मानसिक रोग अचाक्ली बढेको उक्त अस्पतालले जनाएको छ ।
विषम सामाजिक परिस्थिति, विभिन्न खालको तनाव, खानपीनमा लापरवाही, कामको भार, अनियमित दिनचर्या एवं दुव्यर्सनका कारणले मानसिक समस्या सिर्जना हुने डा. पोखरेल बताउँछन् । दैनिक आउने मानसिक रोगीहरूमध्ये झन्डै २ प्रतिशत विद्यालय/कलेज पढ्ने डिप्रेसनका सिकार छात्रछात्रा हुन्छन् । विद्यालय/कलेज पढ्ने किशोरकिशोरीमा डिप्रेसन देखिने कारणमा रक्सी पिउने बानीका कारणले पिताले समय दिन नसक्नु र बा–आमाले सन्तानको मनोभाव नै नबुझी उच्च आकांक्षा राख्नु भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
शिक्षित एवं अशिक्षित तथा धनी एवं गरीब दुवै वर्गका केटाकेटीमा यस्तो समस्या पाइन्छ, डा. पोखरेल भन्छन्— बेलैमा उपचार गराउँदा यस्ता बिरामीमध्ये ८० प्रतिशत पूर्णतया स्वस्थ भएका छन् ।’ सबै थोक पुगेका आफ्ना छोराछोरी डिप्रेसनको सिकार हुनै नसक्ने सोचले पनि अभिभावकहरू मनोचिकित्सककहाँ ढिलो पुग्ने गरेको डा. पोखरेलले बताए । चिकित्सकले मानसिक रोगीलाई नियमित औषधी सेवनसँगै पर्याप्त निद्रा, शारीरिक सरसफाइ, स्वस्थ खानपिन एवं वयष्क जोडी भए पर्याप्त यौनसम्बन्ध कायम गर्न सल्लाह दिन्छन् । – जितेन्द्र साह (साप्ताहिकबाट)